काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई विष युक्त पत्र पठाएको आरोपमा क्यानडाको सीमा क्षेत्रबाट सुरक्षाकर्मीले एक महिलालाई गिरफ्तार गरेका छन् । ह्वाइट हाउसलाई पठाइएको उक्त पत्रमा रिसिन नाम खतरनाक विष भेटिएको थियो ।
पक्राउ परेकी महिला क्यानडाको सीमा क्षेत्र हुँदै अमेरिका घुस्न लागेकी थिइन् । अमेरिकी अधिकारीले बताएअनुसार पक्राउ परेकी ति महिलाबाट बन्दुकसमेत जफत भएको छ ।
रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार महिला न्यूयोर्क नजिकैबाट अमेरिका प्रवेश गर्न लागेकी थिइन् । पक्राउ परेकी उक्त महिलालाई अमेरिकी कानून अनुसार मुद्दा चलाइनेछ ।
पक्राउ परेकी महिलाले केहि साता अघि राष्ट्रपति ट्रम्पको नाममा ह्वाइट हाउसमा पत्र पठाएकी थिइन् । ह्वाइट हाउसमा आउने पत्रहरुको चेकजाँचका क्रममा उक्त विषयुक्त पत्र फेला परेको थियो ।
रोयर्टसले क्यानडेडियन माउन्टेन प्रहरीलाई उद्र्धत गर्दै पत्र क्यानडाबाट नै गएको पुष्टी गरेको छ । जसबारे क्यानडाले जाँचमा सहयोग गर्ने वचन दिएको छ ।
कति घातक हुन्छ रिसिन विष ?
सुरक्षाकर्मीको शुरुवाती जाँच मै पत्रमा भएको विषयुक्त पदार्थ रिसिन भएको पुष्टि भएको थियो । रिसिनलाई एक खतरनाक विष मानिन्छ । यो क्यास्टर नामको वनस्पतीको बिउ हो ।
यदि यो विषाक्त पदार्थ श्वासको माध्यमबाट शरिरमा प्रवेश गर्यो भने संक्रमित व्यक्तिलाई वान्ता हुन्छ । लगत्तै उक्त व्यक्तिको शरिरभित्र रक्तश्राव शुरु हुन्छ । यो विषको प्रभावमा परेको व्यक्ति ४८ घण्टादेखि ७२ घण्टाभित्र मर्न सक्दछ । विषको खतरनाक कुरा, आजसम्म पनि यसको औषधी पत्ता लागेको छैन् ।
यसअघि पनि अमेरिकामा यस्तो घटना घटेको थियो । सन् २०१४ मा पनि राष्ट्रपति बराक ओबामालाई रिसिन पाउडर हालेर पत्र पठाइएको थियो । उक्त रिसिन पाउडर हालेर पत्र पठाउने व्यक्तिलाई त्यस समय सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरि कानूनअनुसार २५ वर्षको जेल सजायँ गरिएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
इन्स्टाग्रामले ल्यायो अबदेखि चार घण्टा लाइभ गर्न मिल्ने सुविधा
१४ कात्तिक । फोटोहरु राख्न मिल्ने सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा अबदेखि…
सेनेगलको समुद्री इलाकामा डुंगा डुब्दा त्यसमा सवार १४० को मृत्यु
१४ कात्तिक । अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको समुद्री इलाकामा गत सप्ताहान्तमा…
मध्य भियतनामको क्वाङनाम प्रान्तमा पहिरो जाँदा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु
कति होला अमेरिकी चुनावमा खर्च ? बिडेन देखिए चन्दा संकलनमा अगाडि